အဖေ့ သမီးလေး အကောင်းအဆိုး ကို အမှား အမှန်ကို ခွဲခြားနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါစေ (မျက်ရည်ခိုင်မှဖတ်ပါ) •
အဖေ့ သမီးလေး အကောင်းအဆိုး ကို အမှား အမှန်ကို ခွဲခြားနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါစေ (မျက်ရည်ခိုင်မှဖတ်ပါ)
19/07/2019 KPST Editorial 0
ဖြစ်ရပ်မှန် ဇတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ပါ ”
တစ်ခါတုန်းက ရွာကလေးတစ်ရွာမှာ သားအဖ နှစ်ယောက်ရှိတယ် ။ ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးလေကို မွေးမွေးပြီး ကတည်းက အလွန်အမင်းကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရတယ် ။
သမီးလေး မွေးပြီးလို့ လသားအရွယ်မှာပဲ မိခင်က ဆုံးပါးရှာတဲ့အတွက် မိတဆိုးသမီးလေးဆိုပြီး လိုလေသေးမရှိ ထားခဲ့တယ် ။ဒါပေမယ့်လည်း ဘဝကံနုံချာလွန်းတဲ့အတွက် ဆင်းဆင်းရဲရဲ့ချို့ချို့တဲ့တဲ့နေခဲ့ရရှာတယ် ။ဒီလိုနဲ့ သမီးလေး အပျိုပေါက်အရွယ်ရောက်လာခဲ့တယ် ။
“ အဖေ . . သမီး မြို့မှာသွားပြီးကျောင်းတက်ချင်တယ် ” အားတက်သရော ပြောလာတဲ့ သမီးငယ်စကားကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ရင်ထဲ ဆို့နင့်သွားခဲ့ရတယ် ။
“ အေးပါသမီးရယ် အဖေပိုင်တဲ့လယ်ကလေးရောင်းပြီး သမီးကို မြို့ကျောင်းထားပေးမှာပေါ့ ” ဆိုပြီးအားပေးစကားပြောဆိုခဲ့တယ် ။
ဒီလိုနဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်မြို့ကျောင်းကို တက်ခဲ့ပါပြီ ။လယ်ယာ မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ ဖခင်ကတော့ တောရွာမှာပဲ သူများလယ်ကို အငှားသွားလုပ်လိုက် ၊ သူများခိုင်းတာလေးလုပ်လိုက်နဲ့ ချို့တဲ့စွာနေခဲ့ရတယ် ။
လစဉ်လတိုင်း ရသမျှ ပိုက်ဆံလေးကို ခြစ်ခြုတ်စုလို့ သမီးလေးအတွက် ပေးပိုရရှာတယ် ။တစ်နေ့တော့ သမီးလေးကိုတွေ့ချင်လွန်းအားကြီးတဲ့ဖခင်က မြို့ကို တက်သွားပြီး သမီးလေးကျောင်းကိုလိုက်သွားခဲ့တယ် ။
သမီးဖြစ်သူက ဖခင်ကိုတွေ့တဲ့အခါ မျက်နှာတစ်ချက်ပျက်သွားပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်လို့ မခေါ်မပြောပဲ ထွက်သွားခဲ့တယ် ။ ဖခင်က ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ ရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ် ။
နောက်တစ်နေ့မှာ ရွာကိုသမီးဖြစ်သူလိုက်လာပြီး ဖခင်ကိုပြောတယ် ။ “ အဖေရယ် ရှက်စရာကြီး သမီးကျောင်းကိုဘာလို့လိုက်လာရတာလဲ … သမီးကိုတွေ့ချင်တယ်ဆို စာရေးလိုက်ပေါ့ လာတွေ့မှာပေါ့ အခုတော့ အဖေ့ကို သမီးအဖေမှန်းသာသိသွားရင် သမီးရှက်လွန်းလို့ မျက်နှာဖော်ရဲမှာမဟုတ်ဘူး ” လို့ပြောခဲ့တယ် ။
ဖခင်ဖြစ်သူက မျက်နှာညှိုးနွမ်းစွာနဲ့ မျက်ရည်တွေစီးကျလို့ သမီးဖြစ်သူကို ဘာမှပြန်မပြောပဲ တွေတွေကြီးပဲစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ် ။အဲဒီလိုနဲ့ . . .သမီးလေးဖြစ်သူ ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့ရောက်လာပါပြီ ။ သမီးဖြစ်သူက ရွာက အဖေလည်း ဘွဲ့ယူတာ ကြည့်ချင်မှာပဲလေ ငါ့အဝေးကနေ ကြည့်ခိုင်းရင်ရတာပဲဆိုပြီး သူ့အဖေကို မြို့ကိုလိုက်လာဖို့ ရွာကိုစာပို့လိုက်တယ် ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ရွာက စာပြန်လာတယ် ။
“ သမီးလေး…။ သမီးလေး စာပိုတဲ့အချိန် အဖေလူ့လောကမှာ မရှိတော့ဘူးကွယ် သမီး လေးမြို့ကိုခေါ်မယ့်ရက် ဆို..အဖေ ဟာ တမလွန်မှာ ရောက်နေရောပေါ့ ဒါကြောင့်ဒီစာလေးကို ကြိုရေးထားခဲ့တာပါ ..
သမီးရေ သမီးငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ သမီး နဲ့အဖေ တခြားရွာကို သွားစဉ်က နေကလည်းပူ လယ်ကွင်းပြင်ပြင်ထဲ မှာ စကားလေးမပီကလာပီကလာနဲ့ သမီး ရေဆာတယ်လို့ ပူဆာခဲ့တယ်နော် ။
အဖေတို့ဆီမှာသောက်ရေကလည်းပါမလာတော့ သမီးကို နေရိပ်ထဲခဏထားပြီး ကွင်းပြင်ကြီးထဲ အဖေပြေးလွှားလို့ တခြားရွာမှာ သောက်ရေ သွားယူခဲ့ဖူးတယ် ။
သမီး နောက်ထပ် ဆယ်နှစ်အရွယ်လောက်မှာပေါ့ ။ သမီးလေး ကျောင်းမှာ မျက်နှာမငယ်ရဖို့ .. အဖေ ဟာ နေ့တိုင်း ထမင်းတစ်နပ်ပဲ စားပြီးခြိုးခြံချွေတာခဲ့ဖူးတယ် ။
သမီးရေ .. သမီးကို ဒါတွေပြန်ပြောနေရတာ သမီးဆီက အဖေ့မေတ္တာကို နားလည်ပေးနိုင်ဖို့တစ်ခုပါပဲ ။သမီးလေး . . သမီးလေး သတိမထားမိလို့ပါကွယ် သမီးလေး မြို့ကျောင်းကို အဖေ အပတ်စဉ်တိုင်းရောက်ပါတယ် သမီးလေးရှက်မှာစိုးလို့ အဖေ အဝေးကနေပဲ သမီးလေးကို ငေးမောကြည်နူးနေခဲ့ရတယ် ။
သမီးရယ် …သမီးဆီက အဖေဘာမှမမျှော်လင့်ပါဘူး လူ့ဘဝဆိုတာက တိုတိုလေးပါ အဲဒီတိုတိုလေးအတွင်းမှာ သမီးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမထားနိုင်ခဲ့တဲ့အဖေ့ကိုယ်သာ အဖေယူကြုံးမရဖြစ်ခဲ့တာပါ
သမီးရယ်. . . အဖေတို့ မိဘတွေဆိုတာ သားသမီးကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိသလို သားသမီးတွေကလည်းအဖေတို့ကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူး ။ဘဝအဆက်ဆက်က ဖြည့်ဆည်းလာတဲ့ ပါရမီတွေကြောင့်သာ ဒီဘဝမှာ မိဘနဲ့သားသမီးဆိုပြီး တော်စပ်လာခဲ့ကြရတာပါ ။
သမီးလေးရေ ..သမီးကို အဖေခွင့်လွှတ်ပါတယ် ။ ကံတရားက မိဘကိုစော်ကားလို့ အပြစ်ပေးမှာကို အဖေက စိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ရတာပါ ။သမီးလေး သွားလေရာ ခလုတ်မထိ ဆူးမညိပါစေနဲ့ ။ ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းပါစေ …
သမီးရေ …ဖေဖေ သွားနှင့်ပြီ ..ကွယ် လူ့လောကမှာ အကောင်းအဆိုးကို အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ ..မှာရင်း အဖေသွားနှင့်ပြီကွယ် ……။
Credit – အရှင်နန္ဒောဘာသာ လင်္ကာရ
အဖေ့ သမီးလေး အကောငျးအဆိုး ကို အမှား အမှနျကို ခှဲခွားနိုငျတဲ့လူတဈယောကျဖွဈနိုငျပါစေ (မကျြရညျခိုငျမှဖတျပါ)
ဖွဈရပျမှနျ ဇတျလမျးလေးတဈပုဒျ ပါ ”
တဈခါတုနျးက ရှာကလေးတဈရှာမှာ သားအဖ နှဈယောကျရှိတယျ ။ ဖခငျဖွဈသူက သမီးလကေို မှေးမှေးပွီး ကတညျးက အလှနျအမငျးကို ခဈြမွတျနိုးခဲ့ရတယျ ။
သမီးလေး မှေးပွီးလို့ လသားအရှယျမှာပဲ မိခငျက ဆုံးပါးရှာတဲ့အတှကျ မိတဆိုးသမီးလေးဆိုပွီး လိုလသေေးမရှိ ထားခဲ့တယျ ။ဒါပမေယျ့လညျး ဘဝကံနုံခြာလှနျးတဲ့အတှကျ ဆငျးဆငျးရဲရဲ့ခြို့ခြို့တဲ့တဲ့နခေဲ့ရရှာတယျ ။ဒီလိုနဲ့ သမီးလေး အပြိုပေါကျအရှယျရောကျလာခဲ့တယျ ။
“ အဖေ . . သမီး မွို့မှာသှားပွီးကြောငျးတကျခငျြတယျ ” အားတကျသရော ပွောလာတဲ့ သမီးငယျစကားကွောငျ့ ဖခငျဖွဈသူရဲ့ ရငျထဲ ဆို့နငျ့သှားခဲ့ရတယျ ။
“ အေးပါသမီးရယျ အဖပေိုငျတဲ့လယျကလေးရောငျးပွီး သမီးကို မွို့ကြောငျးထားပေးမှာပေါ့ ” ဆိုပွီးအားပေးစကားပွောဆိုခဲ့တယျ ။
ဒီလိုနဲ့ သမီးလေးတဈယောကျမွို့ကြောငျးကို တကျခဲ့ပါပွီ ။လယျယာ မဲ့ဖွဈသှားတဲ့ ဖခငျကတော့ တောရှာမှာပဲ သူမြားလယျကို အငှားသှားလုပျလိုကျ ၊ သူမြားခိုငျးတာလေးလုပျလိုကျနဲ့ ခြို့တဲ့စှာနခေဲ့ရတယျ ။
လစဉျလတိုငျး ရသမြှ ပိုကျဆံလေးကို ခွဈခွုတျစုလို့ သမီးလေးအတှကျ ပေးပိုရရှာတယျ ။တဈနတေ့ော့ သမီးလေးကိုတှခေ့ငျြလှနျးအားကွီးတဲ့ဖခငျက မွို့ကို တကျသှားပွီး သမီးလေးကြောငျးကိုလိုကျသှားခဲ့တယျ ။
သမီးဖွဈသူက ဖခငျကိုတှတေဲ့အခါ မကျြနှာတဈခကျြပကျြသှားပွီး မသိခငျြယောငျဆောငျလို့ မချေါမပွောပဲ ထှကျသှားခဲ့တယျ ။ ဖခငျက ဝမျးနညျးစှာနဲ့ပဲ ရှာကိုပွနျလာခဲ့တယျ ။
နောကျတဈနမှေ့ာ ရှာကိုသမီးဖွဈသူလိုကျလာပွီး ဖခငျကိုပွောတယျ ။ “ အဖရေယျ ရှကျစရာကွီး သမီးကြောငျးကိုဘာလို့လိုကျလာရတာလဲ … သမီးကိုတှခေ့ငျြတယျဆို စာရေးလိုကျပေါ့ လာတှမှေ့ာပေါ့ အခုတော့ အဖကေို့ သမီးအဖမှေနျးသာသိသှားရငျ သမီးရှကျလှနျးလို့ မကျြနှာဖျောရဲမှာမဟုတျဘူး ” လို့ပွောခဲ့တယျ ။
ဖခငျဖွဈသူက မကျြနှာညှိုးနှမျးစှာနဲ့ မကျြရညျတှစေီးကလြို့ သမီးဖွဈသူကို ဘာမှပွနျမပွောပဲ တှတှေကွေီးပဲစိုကျကွညျ့နခေဲ့တယျ ။အဲဒီလိုနဲ့ . . .သမီးလေးဖွဈသူ ဘှဲ့ယူတဲ့နရေ့ောကျလာပါပွီ ။ သမီးဖွဈသူက ရှာက အဖလေညျး ဘှဲ့ယူတာ ကွညျ့ခငျြမှာပဲလေ ငါ့အဝေးကနေ ကွညျ့ခိုငျးရငျရတာပဲဆိုပွီး သူ့အဖကေို မွို့ကိုလိုကျလာဖို့ ရှာကိုစာပို့လိုကျတယျ ။ သိပျမကွာခငျမှာပဲ ရှာက စာပွနျလာတယျ ။
“ သမီးလေး…။ သမီးလေး စာပိုတဲ့အခြိနျ အဖလေူ့လောကမှာ မရှိတော့ဘူးကှယျ သမီး လေးမွို့ကိုချေါမယျ့ရကျ ဆို..အဖေ ဟာ တမလှနျမှာ ရောကျနရေောပေါ့ ဒါကွောငျ့ဒီစာလေးကို ကွိုရေးထားခဲ့တာပါ ..
သမီးရေ သမီးငယျငယျတုနျးကပေါ့ သမီး နဲ့အဖေ တခွားရှာကို သှားစဉျက နကေလညျးပူ လယျကှငျးပွငျပွငျထဲ မှာ စကားလေးမပီကလာပီကလာနဲ့ သမီး ရဆောတယျလို့ ပူဆာခဲ့တယျနျော ။
အဖတေို့ဆီမှာသောကျရကေလညျးပါမလာတော့ သမီးကို နရေိပျထဲခဏထားပွီး ကှငျးပွငျကွီးထဲ အဖပွေေးလှားလို့ တခွားရှာမှာ သောကျရေ သှားယူခဲ့ဖူးတယျ ။
သမီး နောကျထပျ ဆယျနှဈအရှယျလောကျမှာပေါ့ ။ သမီးလေး ကြောငျးမှာ မကျြနှာမငယျရဖို့ .. အဖေ ဟာ နတေို့ငျး ထမငျးတဈနပျပဲ စားပွီးခွိုးခွံခြှတောခဲ့ဖူးတယျ ။
သမီးရေ .. သမီးကို ဒါတှပွေနျပွောနရေတာ သမီးဆီက အဖမေ့တ်ေတာကို နားလညျပေးနိုငျဖို့တဈခုပါပဲ ။သမီးလေး . . သမီးလေး သတိမထားမိလို့ပါကှယျ သမီးလေး မွို့ကြောငျးကို အဖေ အပတျစဉျတိုငျးရောကျပါတယျ သမီးလေးရှကျမှာစိုးလို့ အဖေ အဝေးကနပေဲ သမီးလေးကို ငေးမောကွညျနူးနခေဲ့ရတယျ ။
သမီးရယျ …သမီးဆီက အဖဘောမှမမြှျောလငျ့ပါဘူး လူ့ဘဝဆိုတာက တိုတိုလေးပါ အဲဒီတိုတိုလေးအတှငျးမှာ သမီးကိုပွညျ့ပွညျ့စုံစုံမထားနိုငျခဲ့တဲ့အဖကေို့ယျသာ အဖယေူကွုံးမရဖွဈခဲ့တာပါ
သမီးရယျ. . . အဖတေို့ မိဘတှဆေိုတာ သားသမီးကိုရှေးခယျြခှငျ့မရှိသလို သားသမီးတှကေလညျးအဖတေို့ကိုရှေးခယျြခှငျ့မရှိခဲ့ပါဘူး ။ဘဝအဆကျဆကျက ဖွညျ့ဆညျးလာတဲ့ ပါရမီတှကွေောငျ့သာ ဒီဘဝမှာ မိဘနဲ့သားသမီးဆိုပွီး တျောစပျလာခဲ့ကွရတာပါ ။
သမီးလေးရေ ..သမီးကို အဖခှေငျ့လှတျပါတယျ ။ ကံတရားက မိဘကိုစျောကားလို့ အပွဈပေးမှာကို အဖကေ စိုးရိမျပူပနျနခေဲ့ရတာပါ ။သမီးလေး သှားလရော ခလုတျမထိ ဆူးမညိပါစနေဲ့ ။ ဘေးရနျခပျသိမျးကငျးငွိမျးပါစေ …
သမီးရေ …ဖဖေေ သှားနှငျ့ပွီ ..ကှယျ လူ့လောကမှာ အကောငျးအဆိုးကို အမှားအမှနျကို ခှဲခွားနိုငျတဲ့လူတဈယောကျဖွဈအောငျကွိုးစားပါလို့ ..မှာရငျး အဖသှေားနှငျ့ပွီကှယျ ……။
Credit – အရှငျနန်ဒောဘာသာ လင်ျကာရ
တစ်မြို့လုံး အသားမစားတဲ့ မြို့လေး နှင့် သာမည ဆရာတော်
This Year : 82943
Total Hits : 1194236